Dear my sis: ချစ်သုဝေသီချင်းကလတ်တလောမရှိသေးလို့
posted by EMS at 12:21 PM |
posted by EMS at 11:57 AM |
စာမေးပွဲက June2and June 10 , 2subjects
subject တခုကို အကြမ်းဖျင်း chapter ၁၅ ခုစီရှိတယ်..
ems good luck..
posted by EMS at 4:15 PM |
posted by EMS at 4:00 PM |
I like her very much!!!!!!
posted by EMS at 3:09 PM |
The 43th Paek Sang Arts Award
Yejin is nominated for Best Acting Award.
Her recent work "Alone in Love" is also being nominated foraDrama Award.The Award ceremony will be held on 25th April 2007.
posted by EMS at 2:49 PM |
posted by EMS at 3:05 PM |
ဘာတွေစိတ်ကုန်ခဲ့တာလ..ဲအဲဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့နင်လည်းရှောင်နေတာ ၁ နှစ်ရှိရော့မယ် ငါလည်းမေ့ပစ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနီးစပ်ဖို့တွေးကြည့်ရင်းပေါ့....၀န်ခံပါတယ် တရက်မှမေ့မနေခဲ့ပါဘူး..ပြုသူအသစ်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငါဝဌ်ကြွေးရှိသမျှ
မဖြစ်ပါစေနဲ့ **ရယ် ငါတကယ်ဆုတောင်းပါတယ်
ငါလည်းနင်ဝဌ်လိုက်အောင်မနေဘူး..နင့်ရှေ့မှာဘယ်တော့မှမငိုတော့ဘူး _ _.
ငါလေ နင့်မွေးနေ့တိုင်းမှာလည်းဘုရားမှာမေတာပို့တုန်းပဲ နင်စိတ်ချမ်းသာဖို့
နင်ကတော့ဘယ်သိမှာလဲ နင့်အတွက်ဆို ဘာကိုမှသိပ်ကြည့်တတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး..
နင့်အတွက်ဆို ဘယ်သူ့ မှဂရုစိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုမှလည်း
သေချာတာ နင်ပြောတဲ့အပြစ်တွေက ထားသွားဖို့မလုံလောက်ဘူးနော်..
ငါနင့်ကိုအမြဲစိတ်ချမ်းသာစေချင်ပါတယ် ခုချိန်ထိပါပဲ နင်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေခဲ့တာ..
တုန့်ပြန်ခဲ့ဘူးတယ်. ဟား ဟား ပြန်တွေးကြည့်တော့ ငါကိုယ်တိုင်တောင်မယုံချင်ဘူး..
စိတ်မရှည်စွာနဲ့စကားတွေကို အင်း အဲနဲ့၁၀ခွန်းပြည့်အောင်တောင်မပြောနိုင်တော့ပါလား
ငါကိုဆိုနင်ဖုန်းတချက်တောင်မဆက်နိုင်တော့ဘူး..နင်မှတ်မိလား..တချိန်ကအဝေးကြီးမှာတောင် ငါ့တို့ဖုန်းတွေခဏခဏပြောခဲ့တာလေ..ငါခရီးတခုသွားတော့နင်ပြောတယ်၂ရက်စကားမပြောရတာ ရက်၂၀လောက်ကြာသလိုပဲနော်တဲ့..နင့်ပိုတဲ့စာတွေသိမ်းထားတယ်…
ငါပို့တဲ့စာတွေရော..ဟား ဟား.မြောင်းထဲမှာပေါ့ ဒါမှမဟုတ် အမှိုက်တောထဲမှာပေါ့..
Email တွေရော chat history တွေရေိာdelete လုပ်လို့ဝပြီလား..မနှစ်ကသင်္ကြန်က
ဂရုမစိုက်တာမဟုတ်ရပါဘူးလို့ငိုပြောတယ် …ဒါပေမဲ့၁ခါ၂ခါမကတော့ငါလည်း စိတ်ညစ်လာတယ် မြိုသိပ်နေခဲ့တာခုချိန်ထိ..နင်အပြစ်တွေပြောပြီးထားသွားတော့ငါငိုရုံကလွဲပြီး
အခု ငါတို့တမိုးထဲအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ အရင်ကလိုတောင်မနွေးထွေးကြတော့ဘူး..
နင့်ကိုငါစိတ်ကုန်သွားမှာပါဆိုပြီး လက်တွေ့ဘယ်သူကစိတ်ကုန်သွားတာလဲဘယ်သူက### နင်သိပြါ့ပီနော်..ငါလည်းသိပြါ့ပီ..ငါကအစစ်တွေကြီးပဲရခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့ခဏပဲငှားခဲ့ရတာ အပိုင်မရခဲ့ဘူး…ဒီလိုသာကြိုသိရင်ငါအတုတွေပဲလိုချင်ခဲ့ပါတယ်ဟာ..
posted by EMS at 1:11 PM |
Is she your girl friend? so cute.. aha ha ha
မိုးစက်တွေမြေမှာ ပြန့်ကျဲ လွမ်းညနေဒီရာသီထဲမှာ အမှတ်တမဲ့နဲ့ပြန်ဆုံခဲ့ဖူးတယ် ဘယ်မေ့နိုင်မလဲအံသြခြင်းနဲ့ရုတ်တရက်ပဲ
posted by EMS at 1:54 PM |
posted by EMS at 6:06 PM |
ဒီနေ့ မထင်မှတ်ပဲသူငယ်ချင်းတယောက် emsကြောင့်အရမ်း
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး<?xml:namespace prefix = st1 />Ems ကိုအရင်လိုခင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့
အဲဒါကြောင့်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ကိစတခုကိုမရှင်းပဲေ၇ှာင်မိတယ်..
ခုမှ ငါနားလည်မှုများလွဲသွားလားဆိုပြီး ဖုန်းဆက်တဲ့အခါတခါမှ
အဲလိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်..ရှိခဲ့ပါတယ်..ems သူငယ်ချင်းတွေ ..ems ကိုအလိုရှိမှသတိရပြီး တခြားသူတွေနဲ့ပျော်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ..
တခါတခါတော့ကိုယ့်ကိုသူတို့အပေါ်ချစ်သလိုချစ်စေချင်တယ်..နောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်သူ့အပေါ်မှဘာမှမျှော်လင့်ချက်မထားတော့ပါဘူး..ဒီလိုပါပဲဆိုပြီး ဖြေနေခဲ့တာကြာပါပြီ….
posted by EMS at 6:40 PM |